Khabar Break - मिस टिन ‘टिनएजर्स’को प्रतिभा प्रस्तुत गर्न ठाउँ हो : थापा
पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रतिभा प्रस्तुत गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु हुने गरेका छन् । त्यसैक्रममा मकवानपुरमा वाल छाहारी नेपाल र ए वन क्रियसनले नियमित रुपमा मिस हेटौँडा तथा मिस टिन हेटौँडा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि मिस टिन हेटौँडा २०१७ को आयोजना हुँदैछ । यो वर्षको कार्यक्रम निर्देशक भने मिस टिन २०१४ की बिजेता आष्मा थापा हुन। उनीसँग मिस टिन २०१७ को विषयमा खबरब्रेकले गरेको कुराकानी
कस्तो हुँदैछ मिस टिनको तयारी ?
– यो वर्षको मिस टिनलाई हालसम्मकै सबैभन्दा भब्य र सभ्य बनाउको लागि हामी लागिपरेका छौ । मिस टिन प्रतियोगितालाई ‘टिनएजर्स’को प्रतिभा प्रस्तुत गर्न ठाउँ हो भनेर सबैलाई देखाउनके लागि हामि नियमित काममा लागिपरेका छौ ।
कहिलेबाट सुरु हुँदैछ अडिसन ?
– हामीले अहिले रजिष्टेसनको लागि सूचना जारी गरिसकेका छौँ । हामीले भदौको १३ गतेबाट १९ गतेसम्म अडिसन गरिसक्ने योजना बनाएका छौ । अडिसनबाट करिब २५ जना ‘टिनएजर्स लाई सहभागिताको लागि स्विकार गर्ने योजना बनाएका छौ । मिस टिन हेटौँडा भएपनि हामिले मकवानपुर जिल्ला भरका टिनहरुलाई सहभागिता गराउने तयारी गरेका छौ ।
मिस टिन भएपछि के हुन्छ त ?
– वास्तबमा मिस टिन सौन्दर्यको मात्र प्रतियोगिता हैन् । भर्खरै १३ वर्ष उमेर पुगेकाहरुले स्कुल जीवन सकेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नेबेला हुन्छ । त्यसबेला उनीहरुमा धेरै प्रतिभा हुनछन् तर त्यो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने ठाउँ नहुँदा उनीहरुले आफ्नो प्रतिभालाई गुम्साएर राख्नुपर्ने पीडा हुन्छ, हामी त्यहि प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने प्रयासमा हुन्छौ उनीहरुको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरानै त्यहि हो । अर्को कुरा विजयी भएपछि उसलाई समाजले चिन्छ र उसले पनि आफ्नो उदेश्य पुरा गर्न सहि बाटो समात्न सक्ने हुँदा उनीहरुको लागि सबैभन्दा ठुलो पुरस्कारनै त्यहि हो जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा विजेताले पाउने छात्राबृत्ति लगाएतको पुरस्कारलाई नियमित गरेका छौ ।
मिस टिन आयोजना गर्दा कति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ त ?
–प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने मिस टिनको लागि यो वर्ष करिब ४ लाख रुपैँया खर्च हुने अनुमान गरेका छौ । सहभागिहरुलाई तालिम, प्रतियोगिताको लागि हल,ड्रेस लगाएतको विषयमा खर्च हुन्छ ।
मिस टिनमा सहभागिताको लागि आउन चाहानेलाई केहि भन्नु छ त ?
– म मिस टिनमा सहभागिताको लागि इच्छुक साथीहरुलाई यो प्रतियोगितामा भाग लिनको लागि अनुरोध गर्दछु । यहा प्रतिभाको पहिचान हुने हुँदा प्रतियोगितामा भाग लिएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहान्छु ।